Xildhibaano casilay gudoomiayha Baarlamaanka Galmudug – Somali Top News
Xildhibaano casilay gudoomiayha Baarlamaanka Galmudug
September 13, 2018 Somali Top News	0 Comments
(STN-MUQDISHO):_Qeyb ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo fadhigoodu ahaa Dhuusamareeb ayaa maanta xil ka qaadis ku sameeyey guddoomiye Cali Gacal Casir.
Doodda mooshinka looga qaadayo oo ilaa shalay socotay waxaa soo xaadiray 147, codeynta dhacday waxaa in Cali Gacal Casir la tuuro ogolaatay 146, hal Xildhibaan ayaa aamusay.
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa warbaahinta u sheegay in 146 Xildhibaan ay isku raaceen xil ka qaadista Guddoomiye Cali Gacal, halka hal Xildhibaan uu ka aamusay.
Tirada uu hadda u taagan yahay baarlamaanka Galmudug waa isku darka: 89 ka timid baarlamaankii Galmudug iyo 106 ka imaaneysa maamulka Ahlu-sunna, iyada oo tirada guud noqotay 195 Xildhibaan. Dood dheer oo lagu kala tagay ayaa halkaas ka jirtay.
Go’aanka qeyb ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo weliba fadhiyey magaalo aan fadhigooda rasmiga aheyn ay shaqada uga joojiyeen guddoomiye Cali Casir waxaa ay soo afjareysaa dadaallo dhex-dhexaadin ah oo ay wadeen aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanno ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale ku sugan magaalada Cadaado halkaas oo baarlamaanka xarun ah sida ku xusan heshiiskii Djibouti, taas oo keeni karta in fasiraad badan laga bixiyo sababta xilka looga qaadey guuddoomiyaha goob aan baarlamaanka fadhigiisu aheyn.
← Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo kulan la qaatay madax katirsan hay’adda ICAO
Bankiga Aduunka oo khatar badan ka sheegay lacagaha Taleefoonada lagu qaato ee Soomaaliya →
Saraakiishii ugu badneyd ee katirsanaa howlgalka AMISOM oo halmar isaga baxay dalka
June 6, 2019 Somali Top News 0
Haweeney Soomaaliyeed Oo Sarkaal Boolis Ka Aheyd Mareykanka Oo Iscasishay
June 12, 2018 Somali Top News 0
Ra’isul Wasaare Kheyre oo booqasho ku tagay xarunta Bangiga Dhexe ee Dalka
February 9, 2019 Somali Top News 0